युरोपको यी देशमा नेपालीहरुलाई अबसर, तलव २ लाख • raradiodarpan.com
वैदेशिक रोजगारीको लागि युरोपका माल्टा, पो ल्याण्ड, फ्रान्स, पोर्चुगल, टकीं, लगायतका देशरुबाट नेपाली श्रमिकको लागि माग आएको छ । युरोपमा कामदार पठाउने बिभिन्न कन्सल्टेन्सी सर्भिस कम्पनीले विभिन्न २० पदका लागि ८० जना नेपाली श्रमिकको माग गरेको छ ।
बिश्वब्यापी कोरोना महामारीको कारण बैदेशीक रोजगारीका कामहरु ठप्प रहेको अबस्थामा महामारी लगत्तै पठाउने तयारीसहित नेपालका बिभिन्न कम्पनीहरुलाई रोजगार दाता पठाउने अधिकार दिनसक्नेछ । यी सबै सुचनाहरु कोराना महामारी लगत्तै वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट पुर्व स्वीकृति लिएर विज्ञापन गरीने छ ।
सेक्युरिटी गार्ड, वार टेन्डर, पिज्जा मेकर, वेटर, किचन हेल्पर, केयर गिभर लगायत विभिन्न २० पदका लागि श्रमिकको माग गरिएको छ । खाने बस्ने सुविधा सहित काम अनुसार न्यूनतम मासिक तलब १ लाख ३४ हजार देखि अधिकतम २ लाख ८२ हजार सम्म तोकिएको छ ।
विदेशमा गर्ने मेडिकलको खर्च, भिसा शुल्क, हवाई टिकट, रोजगारमा हुने बीमा बापतको प्रिमियम शुल्क सबै रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्ने जनाइएको छ । डिमाण्डमा माग गरिएका पदहरुको लागि सबै प्रकारका परिक्षा तथा अन्तरवार्ताहरु हुनेछ । यस्तो अबस्थामा १. आफ्नो नाममा मिसा प्राप्त भईजाने निश्चित भएपछि मात्र कम्पनीमा गई रकम बुझाउनु होला । बुझाएको रकमको भौचर अनिवार्य लिनुहोला ।
२. आफु काम गर्न जाने मुलकामा रहेको नेपाली कुटनीतिक नियोगको सम्पर्क ठेगाना र फोन नम्बरहरु साथमा राख्नुहोला । आफु कठिनाईमा पर्दा सजिलो हुन्छ ३. यस विज्ञापन सूचनामा उल्लेख भएको भन्दा बढी रकम कसैलाई नदिनहोला ।
४. विदेश जानुअघि अभिमुखीकरण वा इडवरान तालिम अनिवार्य लिनुपने छ । ५. विदेश जानुअघि आफु जाने मुलुक, काम दिने कम्पनी, पाउने सेवा तथा सुविधा र अन्य सर्तबारे राम्रोसंग पढेर मात्र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु होला र सो को एक प्रति आफुसंग राख्नुहोला ६. काममा विदेश जाँदा नेपालको विमानस्थल प्रयोग गर्नुहोला अन्यथा ठगिने सम्भाव्यता हुन्छ । हामीले यो बिषय सामाजीक सञ्जालबाट साभार गरीएको हो ।